Njani ukugoba ii-booties ngenaliti zokunxiba zabaqalayo inyathelo ngenyathelo? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Njani ukugoba ii-booties ngenaliti zokunxiba zabaqalayo inyathelo ngenyathelo?
Siqala ukujija ngale ndlela:
umqolo weshumi elinantandathu kufuneka ube ulandelayo:
Ngoku yiya phambili ekubambeni iinzwane. Sahlulahlula lonke uluhlu lwee-loops zibe zithathu. Siya kubopha icandelo eliphakathi kuphela. Imelwe ukuba ngamalaphu alithoba.
Xa siqhawule umqolo wama-33, emva koko siphakamisa loop ukusuka kwicala leenzwane.
Kuya kufuneka uphakamise iilogo ezisibhozo zecala.
iilogo zecala mazibotshwe ebusweni
Kwakhona kwelinye icala siphakamisa iilogo ezisibhozo. Kuya kufuneka uphathe iilogo ezingamashumi amane anesithathu zizonke.
masiqalise ukuchopha ecaleni. Sayibopha ngeqhaga ngesandla.
Ngoku sibhinqe okuphela. Sithatha ii-loops ezisithoba. Sincamathisela iilogo zecala.
Yenza umngxunya ngentambo.
Eyona ndlela ilula yokutshixa iibhutsi zenaliti zokuqala.
Okokuqala, jonga ubungakanani beebhuki usebenzisa itafile
Ukusebenza kuwe iya kufuneka:
Zimalunga ne-100 g yomtya, kuxhomekeke kubungakanani beebhotile
Iinaliti ezimbini zokujija (3-4 kuxhomekeke kubukhulu bomtya)
U buninzi Ukutsala ii-loops ezili-17 * imiqolo engama-22 = 10 * 10 cm.
Umda ongezantsi kufuneka ugxunyekwe nge-gauze emanzi.
Suka umtya oncedisayo, kwaye uthuke ii-loops ezivulekileyo kwicala elivela embindini kunye nomthungo loop kwilog. Emva koko gqibezela umthungo wangasemva. I-slipper eyintshi ilungile.
Ukuba kusenzima kuwe ukutshintsha imibala, ke ungayibopha yonke imveliso ngombala omnye. Kucetyiswa ukuba kuhonjiswe iibhutsi ngebhanti ye-satin ngendlela yeetayi.
Iibhotile ezibambekayo zabaqalayo zichazwe kwiinkcukacha ezinkulu kwiklasi elandelayo yenkosi.
Ndifuna ukubelana ngendlela elula yokucoca iibhutsi. Sifuna ibhola yoboya kumbala ophambili, kunye nokuhonjiswa - inani elincinci kakhulu loboya obucocekileyo kumbala owahlukileyo.
Ke, sithatha umqolo wokuqala, inani lamanqwanqwa ebhuthini ezinobungakanani obuyi-8 cm likumalunga nama-26 - 28 (kuxhomekeke kubukhulu bomtya). Umsebenzi wethu kukubopha i-T-form ngayo nangayiphi na indlela: ungasebenzisa istayile se garter, njengakulo mfanekiso.
Sinciphisa itemplate eyosiweyo ngombala ohlukileyo, sisongele kungenanto, njengoko kubonisiwe emfanekisweni, yonke into, iibhutsi ezimnandi zilungile. Uncedo lwale ndlela kukuba awudingi ukugoba isithende, ii-booties zombini zintle kwaye zikhululekile ukunxiba.
Ngapha koko, kumntu onamava, ukugoba ii-booties akuwona msebenzi onzima kangako. Ukuqalisa kuya kuba nzima ngakumbi. Into ephambili kukufumaneka komgangatho we-yarn esemgangathweni kunye neenaliti ezilungileyo zokunxiba. Ke, inyathelo ngenyathelo, ungabopha iibhutsi ngale ndlela ilandelayo (inkqubo ayikhawulezi)
Sithatha umsonto, sithatha inani elithile loops
Kuyimfuneko ukwahlulahlula umtya ube ngamacandelo aliqela. Ngokwesiqhelo yahlulahlulwe ibe ngamacandelo ama-3, ukuze usebenze
Siqala ukujija ukusuka embindini. Phakamisa imiphetho ngokokude baphakame.
Ungalibali ukubopha ipateni. Kwaye ngaphaya koko - ukuphela kweebhuthi kufuneka komelele, kwaye okona kubaluleke kakhulu - kukukhululeka.
Isiphumo ziibhothithi ezikhululekileyo. Ubuncinci obuncinci - ividiyo, enye inketho kwindlela yokubopha i-booties inyathelo ngenyathelo.
Kwiibhotshi kufuneka uzipakishe:
umsonto (lilac, ukukhanya okukhanya lilac eluhlaza),
ukujija iinaliti zeesokisi,
Inaliti yokutshekisha 4,
ukuthunga inaliti ngamehlo amakhulu.
Siqhawule umqolo wokuqala wokuqala - umsonto we-lilac, wama-39.
Imigca 2-18: sijijekile, ngokutshintshiselana 2 ngaphambili kunye ne-2 loops engalunganga.
Umqolo we-19: intonga yangaphambili emi-2 yadityaniswa ngokudibanisa, ikhola, kwakhona ngaphambili iziqu ezi-2, ikhreythi - ukuya esiphelweni.
Iirowu ezingama-20 - iiplanga zokucofa (imingxunya - yokuqinisa imitya),
Umqolo we-21-sahlulahlula zonke ii-loops zangama-3.
Kwinaliti yokucheba esembindini sadibanisa izitshixo ezi-13 - iipateni ezi-1 zomqolo; isicatshulwa; ipatchwork ;, umgca 2-ukutshintsha iilogo ezingaphambekiyo, emva koko imigca emi-3 ukuya kwezi-14 kunye noku-1 kunye no-2.
Icala elisecaleni lilunga ngolu hlobo:
Umqolo woku-1 - qhagamshela iinzwane ngenaliti yokujija esecaleni, uncamathisele imitya yangaphambili.
Iinkcukacha ezingaphezulu ziyafumaneka apha.
Uninzi lweembono ezintle kunye nezangempela zokubhinca iibhuthi zomntwana ngenaliti zokujija. Ayisiyo kuphela intle, kodwa ilungele bobabini umama nomntwana.
Into ephambili kukuba ukhethe imicu ekhanyayo nethambileyo, ngokukhethekileyo kubantwana, ukuze bangakratshi kwaye babangele ukungalungelelani emntwaneni, kuba nangaliphi na ixesha uya kuzama iibhutsi kunye nokunambitha.
Unokugoba iibhutsi kunye neenaliti ezimbini zokunkina, emva koko uthunge. Ndiyathanda ukujija ngenaliti zokunkina (iinaliti ezi-5 zokujija) ngakumbi ukuze kungabikho seams kwiibhutsi. Kodwa kukuwe ukuba ukhethe eyona oyithandayo.
Kukho iibhutsi ezinjalo, ngakumbi nangakumbi njengeebhutsi, unokukhetha ukuphakama ngokwakho.
Kukho iiklasi ezininzi zee-master master eziza kunceda ukudibanisa i-booties emangalisayo. Kwaye ukuba uyihombise, kunokwenzeka ngoncedo lweentyatyambo eziqingqiweyo, iziqhamo okanye ukubiza, unokuthunga ubuhlalu, amaqhosha.
Ezi booties zine roses zilungele amantombazana.
Kwaye iibhutsi ezinjalo, izinja, zinokucwangciswa kwinkwenkwe.
Nantsi ividiyo yokumitha iibhuthi ezilula, kubaqalayo.
Iibhothi ezintsonkothileyo zilula, ngaphandle kokuba uyayazi indlela yokugoba.
Ukuba ngaphambi koku awuzange uthathe iinaliti zokuqhaqha, ndincoma ukuba ungaquki ngeebhotile, kodwa ngesikhafu esilula, funda indlela yokugoba ngaphambili kunye nasemva, emva koko ungaqhubeka nokubhinqisa iintsimbi.
Ungakwazi ukugoba iibhutsi ukuqala zombini kunye ne-cuff.
Ndikunika ukhetho lokuya ngebhotile ngecuff:
Iibhothi zilula ukubopha nkqu nakwisiqalo. Ukwenza oku, kufuneka uthathe inaliti zokujija kwaye uqalise, ukuzama ukugoba okungalunganga kunye nokuphamba ngaphambili. Siqeqesha ukuqala ukuloba isikhafu, kwaye emva koko simisele ukuya kwiibhotile ezincinci.
Unokuvavanya umbala. Unokuqala ukuqinisa iibhutsi zomzimba ezincinci.
Iinaliti ezijijayo Unokubotshwa ngeendlela ezininzi.
Ndijonge ikakhulu ngolu hlobo lulandelayo:
1) Ndithatha i-sinding knitting needle (iziqwenga ezi-5), intambo (nayiphi na intambo iza kuyenza, kodwa kubonakala ngathi kulungile ukusebenzisa umsonto wefayibha yendalo, kwaye i-acrylic nayo iya kusetyenziswa ekuhombiseni nasekubopheleni imiphetho. Ubusika busebenza kungcono ukuthatha uboya kunye nekotoni ehlotyeni).
2) Ndiqokelela imichilo ngenaliti yokutsala (ububanzi bonyawo) malunga ne-3 cm kwaye siqalise ukujija i-garter stitch ubude elingana nobude bonyawo.
I-3) Ngoku, kuwo onke amacala e-rectangle yesiphumo, ndidweba iilingi kwiinaliti ezi-4 zokutshixwa kwaye ndibhinqe isangqa. Ndinokutshintsha eminye imigca engalunganga kunye neyangaphambili okanye ndinxibelelanise kuphela ezingalunganga. Ndadibanisa umphakamo omalunga ne-1,5 - 2 cm (ukuphakama kweenyawo).
4) Ndishiya inaliti kwindawo apho siya kuba ne-sock yexesha elizayo. Ngoku ndisebenza ngeenaliti ezimbini zokunkqonkqoza: Ndakhonkotha ukubamba ekugqibeleni komqolo ngamnye kwilaphu elinye ukusuka kwinaliti yokuqhobosha kufutshane (ndakhonkotha ilokhwe yokugqibela ngentloko ukusuka ngenaliti yokucheba yabamelwane). Ke, i-sock iqala ukubumba.
I-5) Xa isiqingatha sokutsalwa kweenaliti ezikufuphi sisongelwe, ndiqala ukusebenza kwakhona ngawo onke amanaliti amahlanu okugoba kwisetyhula. Sele ndibhinqe ngebhendi ye-elastic imigca emininzi njengoko ingcinga yam iphuma.
I-6) Iibhuthi zikulungele. Yonke into ilula kakhulu kwaye akukho seams!
Ngumbono omkhulu ukubopha iibhugi zomntwana nosana olusanda kuzalwa, kuba ngale ndlela uya kubeka lonke uthando lwakho ngomntwana, aludinga ngokwenyani, kuzo, kwaye nantsi ke le scheme ekufuneka uyityile, kunye nenkcazo yale nkqubo iphantsi kancinci.
Ewe, kwaye kumnandi ukuzenzela kuye, ukuzithemba kwakhe kuya kukhula. Kwaye oku kunokwenziwa nokuba kuqalwa kwaye ngezantsi kweskimu esipheleleyo sokutsala izihlangu ezinjalo kumntwana osanda kuzalwa, yonke into ineenkcukacha kwaye iyaqondakala. Kwaye le yindlela ukubotshwa kweebhotshi ezijingiweyo, uya kudinga uboya bokudibanisa kunye nenaliti zokujija, kunye nenaliti enamehlo amakhulu nesikhafu kunye namaqhosha amahle. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukuba bekukho imeko-mvakalelo kunye nomonde, emva koko yonke into iya kukusebenzela.
Iibhotile zosana, mhlawumbi, ezidityaniswe kubo bonke oomama okungenani kubomi bam :) Ndizakutsho kwangoko ukuba kulula kakhulu kum ukuba ndicekeceke kunokubopha. Kodwa ukuthanda ukwazi kuthathe ixesha labo lesigqibo kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndibukele iindibano zocweyo ezininzi zokwenza iibhothi ezintsontelo zabantwana ngezandla zam. Ndabelana ngeendlela ezininzi zokwenza izicathulo ezifudumeleyo zabantwana bethu.
Eyona ndlela imangalisayo yokuqalisa kweebhotile zenaliti kwiinaliti ezimbini zokufaka:
Iklasi ye-master master yophando malunga neebhotile ezine-rose kwiinalthi zokutsala:
Iibhotile ezibunjiweyo zomntwana kwiinaliti zokujija
Imibuzo ye-59 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,390.